Inuu Ayeeyo Koris Yahay, Meesha Ay Isku Barteen Xaakiisa & 4 Arin Oo Ka Aqoon Goolhaye Real Ee Navas %
By Laacib News	 On Mar 17, 2018
Goolhayaha Real Madrid iyo qaranka Costa Rica, ee Keylor Navas, waa kamid ah ciyaartoydii ugu fiican ee kasoo baxda Bartamaha qaarada Ameerika, waxaana loo tix-geliyey inuu kamid yahay kuwa ugu fiican aduunka, kadib markii uu koobab la qaaday kooxdiisa.
Saddex sano oo uu ku sugan yahay Bernabéu, ayaa wuxuu kusoo biiray sanadka 2014, kadib markii uu bandhig fiican uu ka sameeyay koobka aduunka sanadkii 2014-kii ee Brazil, lagu abtay, isagoona dookha koowaad kala baxay dhigiisa Iker Casillas.
31-sano jirkaan marka laga soo tago bandhigiisa fiican ee aan caadiga ahayn, waxaan halkaan hoose aan idin kugu soo gudbin doonaa Afar arrimood kuwaasoo laga yaabo in aadan ku aqoon Goolhayahaan muuqaal ciyaareedka fiican ku jira.
Inuu Yahay Ayeeyo Koris
Hooyadiisa oo lagu magacaabo Sandra Gamboa iyo Aabihiisa Freddy Navas, waxay uga tageen xarun lagu xanaaneeyo caruurta, isagoona Afar-sano jir ah, markaasoo ay aadeen wadanka Mareykanka si ay usoo sameeyaan lacag ama dhaqaalo.
Markaas wixii ka dambeeyay waxaa barbaarintiisa la wareegtay Awoowayaashiisa, gaara ahaan Ayeeyadiisa, waxayna usoo xanaaneeyeen sida Cugugooda oo kale.
Navas hooyadiisa, oo mar ka hadashay go’aankii layaabka lahaa oo ay uga tageen wiilkooda, ayaa waxay sheegtay inay uga mahad-celineyso walaasheeda sida ay ugu soo daryeeshay wiilkeeda, ayna ku qaldaneed go’aankaas.
Albacete Waa Kooxdiisii Ugu Horeysay Ee Yurub
Inkastoo uu kusoo shaac-baxay Levante, halkaasoo uu ugu soo guuleystay abaalmarinta LFP award oo udhiganta Goolhayihii ugu fiicnaa sanad ciyaareedkii 2013-14, markaasoo heerka labaad ee Spain uu joogay, hadana Navas ayaa 2010 ku biiray Albacete.
Naadigaan oo qudeeda heerla labaad ka dheesha wuxuu ka ahaa Navas dookha koowaad isagoona udheelay 36 kulan, laakiin ma uusan ku sameyn wax guulo oo la taaban karo, isagoona Levante si amaah ah ku yimid xagaagii 2011-12.
Xaaskiisa Waxay Isku Barteen Kaniisad
Keylor Navas, waa mid haysata diinta Karishtanka, waxaana ay ku kulmeen xaaskiisa mustaqbalka uu guursan doono Kaniisad lagu caabudo Kitaabka Injil oo ku taala Magaaladda Santa Ana, sanadkii 2008-dii.
Labadooda waxay soo xaadiri jireen Kaniisadda maalmaha Isniinta iyo Talaadda, iyadoona Navas uu ku guuleystay inuu kasbado Qalbigada saaxiibadiisa, isagoo usoo maraya walaasheeda oo lagu magacaabo Daniela.
Sanadkii 2009-kii Navas iyo gacalisadiisa Salas waa ay is-guursadeen iyagoona hadda haysta wiil, kaasoo lagu magacaabo Mateo.
Koox Xaafadiisa Ka Dhisneed Oo Diiday Inuu Aad U Yar Yahay
Inkastoo uu hada dookha koowaad ka yahay Real Madrid, hadana bilowga xirfadiisa wuxuu soo maray dhibaato badan, maxaa yeelay inuu ahaa mid culeyskiisa uu yaraa.
Markii ugu horeysay koox xaafadiisa ka dhisneed oo lagu magacaabo Pérez Zeledón, ayaa isaga diiday inuu yar-yahay sidoo kale waxaa sidaas oo kale isaga diiday koox dalka Argentina ka dhisan oo la yiraahdo Racing de Avellaneda sanadkii 2010.